जग्गा प्रकरण: सांसद संजय यादवलाई कानुनी रुपमा कारबाही हुनुपर्छ, पिडितकाे माग ! - हाम्रो जनकपुर
जग्गा प्रकरण: सांसद संजय यादवलाई कानुनी रुपमा कारबाही हुनुपर्छ, पिडितकाे माग !
२०७७ चैत्र २३, सोमबार ०८:२८
जनकपुरधाम । अंशबन्डाको मुद्दामा जिल्ला अदालत सर्लाहीले आफ्नै निर्णय सच्याउन पहल गरेपछि पिडितले न्याय पाएका छन ।
सांसद यादवले अदालतलाई झुक्किएर तीन अंसलालाइ अाफै एक अंश बनाएकाे उनले बताए ।
पिडित के भन्छ थप पढनु हाेला !